Dulmarka Guud ee umusha ka dib Columbus, OH | Caafimaadka PW
Dulmarka guud ee umusha ka dib Columbus, OH
Markii aad guriga timaaddo, way ku caawinaysaa haddii aad hawlahaaga ku koobto daryeelka ilmaha oo aad u dhiibato hawlaha guriga, karinta, iwm, dadka kale usbuuca ugu horreeya. Yaree safarada kor iyo hoos jaranjarada oo ku samee sicir fasax ah. Waa inaadan qaadin wax ka culus ilmaha toddobaadka ugu horreeya. Waxaad u baahan doontaa nasasho dheeraad ah inta lagu jiro maalinta labada toddobaad ee ugu horreeya ama wixii la mid ah; sidaa darteed, subaxdii iyo galabtiiba waa la soo jeedinayaa. Waxaad dib u bilaabi kartaa raacida ama wadida gaariga markii aad dareento raaxo.
Sii wad qaadashada qubayska sitz saddex jeer maalintii ugu yaraan usbuuca ugu horreeya. Qubeyska tuubada waa la ogol yahay isla marka ay umusho haddii socodka xubinta taranka haweenka aysan badneyn.
Dhiig-baxa dhalmada kadib waxaa loo yaqaan lochia waxayna socon kartaa ugu yaraan 2-3 toddobaad iyo illaa iyo 6-8 toddobaad. Isbitaalka dhexdiisa dheecaankaagu waa casaan dhalaalaya waana culus yahay, hase yeeshe, markaad guriga aaddo waxay caadi ahaan u egtahay caadadaada. Qulqulka ayaa sii wadi doona inuu yareeyo hal mar guriga oo midabku wuxuu ka bixi doonaa casaan dhalaalaya illaa casaan, iyo ugu dambeyntiina huruud-cad. Haddii dheecaankaagu dib ugu noqdo casaan ama qulqulka socodka uu kordho tani waa calaamad muujinaysa inaad wax badan qabanayso oo aad u baahan tahay inaad nasato. Haddii aad suuxinayso wax ka badan suuf saacad gudaheed ama aad la kulanto xanuun badan, waa inaad wacdaa xafiiska.
Qadar cayiman oo bararka naaska waa dabiici. Waxaan kugula talineynaa faashad duub ah oo si adag loogu duuduubay naasaha 24 ilaa 48 saacadood, ilaa raaxo leh. Waxaad sidoo kale dalban kartaa xirmooyin baraf ah naasaha illaa 20 daqiiqo, seddex ilaa afar jeer maalintii, 24 illaa 48 saacadood. Ka fogow kicinta tooska ah ee naasahaaga, sida qubeyska kulul, dharka dabacsan iyo is-daba-marin. Ka fogow qaadashada badan haddii aan si kale laguugula talin.
A rajabeeto kalkaaliye caafimaad oo taageero leh waa in la xidho habeen iyo maalinba. Iska ilaali inaad si saabuun ah ibta ugu adeegsatid. Ka dib fadhiga naas nuujinta, u oggolow ibtaada inay hawo qallajiso. Qanjirrada saliida dabiiciga ah ee ku wareegsan hareeraha areoladu waxay dhawri doonaan ibta oo jilicsan oo jilicsan. Kareemada naaska ayaan lagula talin. Quudinta joogtada ah ee 8 ilaa 12 jeer 24 saacadood gudahood waxay kaa caawineysaa kahortagga jarista. Xanuunka ibta ayaa la filayaa ugu horreyn hal ilaa laba toddobaad. Haddii aad isku aragto dildilaac ama dhiig bax ibta, fadlan wac xafiiska. La-tashiga khabiir nuujinta oo laga heli karo xafiiskayaga.
Gudbinta xinjirowga inta lagu jiro labada toddobaad ee umusha ka dib caadi maahan. Waxay ku kala duwanaan karaan cabirka cabirka digir ilaa cabirka kubbadda golf-ka. Haddii aad gudbinayso xinjirooyin ka weyn kubbadaha golf ama xinjirooyinka aad dhaafayso laba toddobaad ka dib dhalmada, fadlan wac xafiiska.
Iskuday inaad cuntid cunnooyinka dabiiciga sida bur, casiirka, tufaaxa, tufaaxa tufaaxa, jajabka buunshaha ama sabiib. Kordhi dareerahaaga, gaar ahaan biyaha. Ka fogow kafeega (koolasyada, shaaha, kafee iyo shukulaatada). Haddii calool jilciye loo baahan yahay, qaado hal ounce oo ah Caanaha Magnesia wakhtiga jiifka.
Cunto isku dheelitiran ayaa lagama maarmaan u ah habka bogsashada. Hooyada nuujineysa, shuruudaha kalooriga caadiga ah waa 2,000 oo kaloori ama ka badan maalintii. Cuntadaadu waa inay gaar ahaan ku dartaa cuntooyinka borotiinku ku badan yahay, sida hilibka, jiiska, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo ukunta. Cab cabitaanno fara badan, gaar ahaan naasnuujinta. Kordhinta cabitaankaaga waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad iska ilaaliso calool istaagga.
Tolmadaada ayaa iskood u milmi doonta. Ha ka nixin walax ku dhejisid ama ku jiidid aagga xubinta taranka xilligan; gebi ahaanba waa caadi. Tallaabooyinka raaxada waxaa ka mid ah qubayska sitz iyo caqli gal iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Waxaad qaadan kartaa asbiriin ama Tylenol®, laba kaniini seddexdii ilaa afartii saacadoodba mar si aad u hesho raaxo la'aan.
Waxaad bilaabi kartaa jimicsi marka ilmuhu jiro hal toddobaad. Haddii ay jiraan wax xanuun ah oo ku dhaca dhaqdhaqaaqa, waa inaad joojiso. Haddii aad lahayd C-Section, iska ilaali jimicsiyada ku lug leh isticmaalka tooska ah ee muruqyada caloosha, sida fadhiga, iwm, ilaa baaritaankaaga 4-toddobaad ah. Ma socon doono orod, orod ama jimicsi ilaa uu socdo imtixaankaaga 4-toddobaad ah.
Si loo yareeyo raaxo la'aanta, ka fogow taagnaanta ama fadhiga muddo dheer. Qaado wakhtiyo nasasho mar kasta oo ay suurogal tahay maalintii, adoo jiifaya dhinaca bidix lugahaaga oo saaran laba barkimo. Jilibka / xabadka boosku sidoo kale wuu fududaanayaa waana ku caawinayaa. Ha u oggolaan naftaada inaad noqoto calool fadhiga. Cab cabitaanno fara badan! Qubayska 'Sitz' ayaa kaa caawin doona oo waxaa loo isticmaali karaa Diyaarinta H® ama Anusol HC®. Tuubada taakulaynta ayaa lagula talinayaa maxaa yeelay waxay wanaajiyaan oo ay kordhiyaan wareegga dhiigga.
Haddii ilmahaaga dhalo la quudiyay, waxaad u badan tahay inaad dib u bilaabi doonto caadada afar ilaa toban toddobaad laga bilaabo waqtiga dhalmada. Haddii aad naas nuujinaysid, waxaa laga yaabaa inaad, laakiin laga yaabee inaadan yeelan, muddo 3 bilood ah ama ka badan dhalmada ka dib. Muddada koowaad waxay ka culus tahay socodkaaga caadiga ah.
Fadlan wac dhakhtarkaaga carruurta wixii su'aalo ah ee ku saabsan ilmahaaga dhasha ah ama aad daryeelka degdegga ah / Isbitaalka Carruurta wixii ah welwel daryeel caafimaad.
Muddadaada umusha ka dib waxaa laga yaabaa inay ka buuxsamaan shucuur kala duwan oo kala duwan oo waxaad u badan tahay inaad haysatid 1-3 maalmood oo ah "Baby Blues". Si kastaba ha noqotee, haddii calaamadaha ay soconayaan in ka badan hal toddobaad ama ay daran yihiin, fadlan wac ballan si aad ugala hadasho niyad-jabka dhalmada ka dib. Sidoo kale, ka eeg niyad-jabka umusha hooyada uurka ku jirta websaydhkayaga.
Isdhexgalka lama taliyo afarta toddobaad ee ugu horreysa umusha ka dib. Taas ka dib, bogsigu wuu kufilan karaa, oo dheecaanka ayaa yaraaday si loogu oggolaado xiriir galmo raaxo leh. KY Jelly ama Replens, badeecooyinka lagu iibiyo miiska dushiisa, ayaa lagu taliyaa inay yihiin saliid maadama xubinta taranka caadiyan ay u egtahay mid qalalan kadib umulida. Xumbada siilka oo ay la socoto cinjirka galmada waa in loo adeegsadaa ka hortag ahaan ilaa baaritaankaaga afarta toddobaad ah.
Xusuusnow: Naasnuujintu ma aha nooc ka mid ah xakameynta dhalmada.
Qaado heerkulkaaga hal mar maalintii fiidkii usbuuca ugu horeeya dhalmada kadib. Ogeysii xafiiska haddii uu yahay 100 darajo ama ka sareeya.
Haddii aad naas nuujinayso, sii wad qaadashada fiitamiinnada uurka saddex bilood ka dib markaad naaska ka gudhisid. Haddii dhalo-quudin, sii wad qaadashada iyaga saddex bilood kadib dhalmada.
Haddii aad nuugayso wax ka badan suuf saacad gudaheed ah ama aad la kulanto xanuun badan oo leh dhiig-bax umusha ka dib.
Haddii aad gudbeyso xinjirooyin ka weyn kubbadaha golf-ka ama xinjirooyinka aad dhaafayso laba toddobaad kadib umusha
Haddii astaamaha niyad-jabka dhalmada kadib ay sii socdaan in ka badan toddobaad ama ay daran yihiin.
Haddii aad isku aragtid dildilaac ama dhiig bax ibta naasaha.
Dulmarka dhalmada kadib FAQs
Waa maxay calaamadaha murugada umusha ka dib?
Calaamado badan ayaa laga yaabaa inaad qabtid niyad-jabka umusha ka dib. In kasta oo "Baby Blues" ay jirto oo keliya muddo gaaban, niyad-jabka dhalmada ka dib wuxuu sii jiri karaa waqti dheer. Calaamadaha waxaa ka mid noqon kara:
Dareen murugo ama rajo la'aan ah oo aan ka tagin
Luminta xiisaha dhaqdhaqaaqyada farxadda kuu keeni jiray
Ka noqoshada asxaabta iyo qoyska
Isbeddellada qaabka hurdada ama rabitaanka cuntada
Immisa hurdo ah ayaan u baahanahay dhalmada kadib?
Waxay u badan tahay inaad aad u daalan doonto dhalmada ka dib. Waa muhiim inaad hesho nasasho badan intii suurtogal ah oo aad qorsheysato inaad seexato marka ilmahaagu seexdo. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad seexato maalintii oo aad seexato siddeed saacadood oo adag habeen kasta. Wac kooxdayada Columbus, OH, haddii ay dhibaato kaa haysato dhicid ama hurdo. Waxaan ku siin karnaa talooyin waxaanan kaa caawin karnaa inaad hesho nasashada aad u baahan tahay.
Maxaa dhacaya haddii aan u baahdo caawimaad dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka umusha?
Haddii aad dareemayso culays ama aad u baahan tahay taageero dheeraad ah, ha ka waaban inaad la xidhiidho bixiye jooga Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka. Xubnaha kooxdayadu waa kuwo aad u tababaran oo khibrad u leh daryeelka hooyooyinka cusub. Waxaan ku siin karnaa ilo, taageero, iyo macluumaad dhammaystiran si aan kaaga gudubno waqtigan adag.